Çanakkale 1915 Akwa ga-abụ ọrụ emere na Machị 2022 | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyMpaghara Marmara17 CanakkaleÇanakkale 1915 Akwa ga-abụ ọrụ emere na Machị 2022
16 / 05 / 2020 17 Canakkale, General, hyperlinks, Ụzọ Awara Awara, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey, VIDIO
akwa uzo canakkale ga abanye oru
Onye isi ala Recep Tayyip Erdoğan gara attendedanakkale 1915 Bridge Tower Mmecha Ememe na mkparịta ụka vidiyo ya na Minister nke ofgbọ njem na akụrụngwa Adil Karaismailoğlu.
Erdogan na Karaismailoğlu kwuru okwu n'ememe nke ngwụcha nke otu n'ime ụlọ elu ahụ.
Isi okwu nile emere n'ememe a bụ ndị a:
N’eche na anyị ga-emezu nkwa anyị iji dobe àkwà mmiri a na Machị 2022, anyị ga-emeghe ọrụ ndị Turkey niile
Oge etiti etiti obodo 2023 dị ka ihe atụ nke ebumnuche anyị 2023.
Bridgewu àkwà mmiri na Çanakkale Strait bụ nrọ nke ọtụtụ narị afọ. Dị ka ọtụtụ nrọ na mba anyị, ọ bụ otuto anyị ime ka ọ bụrụ ihe ọhụụ.
N'ime ụwa nke a ga-emezigharị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na akụ na ụba mgbe coronavirus, akwa a ga-abụrụ anyị akụrụngwa dị oke mkpa.
Site na usoro a, a na-emechi mgbidi niile nke ụlọ elu 4 niile ma bụrụkwa ọkwa dị mkpa na ịwu akwa ahụ ugbu a.
Başakşehir City Hospital II. na Mee 21, yana Prime Minister nke Japan, Maazị Abe, site na ntinye vidiyo.
Ka anyị na-eme ihe ndị a, ngalaba nke CHP na-eduzi na-anwa igbochi ọrụ anyị oge niile, iji gbochie anyị ịgha ụgha na nkwutọ.
Mmegide na otu nkwado nkwado na Van bụ mpụ nke ndị otu HDP. A na-eme ihe omume HDP n'otu ụzọ ahụ dị ka ndị otu CHP. Usoro dị iche.
Minister nke Transport Adil Karaismailoğlu: Taa anyị na-agba ama akụkọ ihe mere eme. Anyị na-ezukọ ụlọ elu ụwa nke 1915 Çanakkale Bridge. Ọrụ ụgbọ mmiri dị n'etiti Lapseki na Gelibolu ga-ewe awa 1.5 na akwa ahụ, ebe ọ ga-ewe awa 6. Gbọ njem na-aga njem n'okporo ụzọ anyị na-abawanye kwa ụbọchị. Ọdọ mmiri ahụ ga-ejikọ Thrace na Mpaghara Aegean, ọ ga-ewetakwa nnukwu uru na mkpa akụ na ụba. Willzọ steeti a ga-eme ka ọ bụrụ kilomita 101 n'okporo ụzọ awara awara-kilogram 40. A ga-echekwa nde 567 TL kwa afọ. Dịka n'ihe karịrị ụlọ ọrụ 1000 na-ewu ihe na mba ahụ, anyị na-eme ihe kwekọrọ n'ụkpụrụ ahụike mbụ na nchekwa ọrụ.
A ga-emeghe 1915 Çanakkale Bridge na 18 March 2022
A ga-emepe 1915 Çanakkale Bridge na 18 March 2022
Taa na History: 18 March 2017 1915 Ntọala nke Çanakkale Bridge
Taa na akụkọ ihe mere eme: 18 March 2017 1915 The Canakkale Bridge ...
Prime Minista Yıldırım, 1915 Canakkale Bridge Construction Examined
Dr. Ersin Arıoğlu 1915 Çanakkale Bridge Ngosi na Istanbul Bridge Conference re